(Kugcine ukubuyekezwa On: 11/04/2022)
I polemic ku ukuqeqesha kuqhathaniswa ibhasi e-Europe isihloko never-ophela, wonke umuntu unombono wakhe. kodwa, siyizilwane ngisho ukukhuluma mayelana nokuphepha, futhi uma sifuna - ingabe kwanele? Ukuphepha kwezinto zokuhamba esizikhethile kufanele kuze kuqala ngaso sonke isikhathi, futhi siyakucela ekhuluma namuhla. ngokuvamile, abantu zivame ukulalela lesi sihloko ngendlela ehlukile, kuye abo okuthandwa wokujikeleza. Ngaphezu kwalokho, izindaba zakamuva sizwa izingozi emhlabeni isici izwe e, kanjalo. Nakuba uzoba bayaqabukela bezwe kwakukhona ukuphahlazeka isitimela endaweni ethile, kuyenzeka. Njengoba nje kwenzeka umoya, imoto, ibhasi kanye nezinye izindlela zokuhamba. Noma kunjalo, izibalo zicacile - ngokusemthethweni, isitimela ingenye izindlela nephephile yokuhamba kulezi zinsuku! Izinga elifanayo lokuphepha liya ekuthuthweni kwezindiza ngenkathi zonke ezinye izinto zokuhamba zilandela.
Isitimela Enye Yezindlela Zokuthutha Eziphephe Kakhulu Kuwo Wonke Amazwe?
Ayikho, akuyona. Akubona bonke komzila nezitimela bangabezwe izinga efanayo. Uma sikhuluma wesitimela ukuphepha travel, esivame ukukhuluma ngakho esimeningcondvo ezweni elithile. ngokuvamile, ujantshi travel iphephile kakhulu, kodwa namanje akulimazi ukuhlola isimo somzila wezwe nokuxhumana uma ufuna ukuhamba ngesitimela.
Lapho bobabili kwezitimela nezitimela ngokwanele zinakekelwe (okuyi, njalo serviced, zigcinwe, indawo lapho kudingeka, njll), uzoba akuvami ukufakaza yimuphi izingozi nale kusho yezokuthutha. Esinye sezizathu wukuthi, ngokungafani zokuthutha umgwaqo, kunendlela eyodwa kuphela kanye nendlela eyodwa yokuhamba (okuyi, isitimela) ezilandelayo omunye umzila oya endaweni oya zaso zokugcina. Ayikho izimoto ezingalindelekile ziyeza indlela yakho, okwenza ulahlekelwa ukulawula isondo. Azikho ukuqhela okungazelelwe kanye ematfuba, noma ezinye izimo ezicindezelayo nezingase zibe yingozi. Lokhu kungaba esinye sezizathu esenza zokuthutha ngesitimela uye wahlala omunye tindlela nephephile yokuhamba kuze kube manje.
Kulezi zinsuku, lapho wonke umuntu esetshenzwa ngokweqile futhi bagxume besuka emazwini abo esihlalweni imoto esitulwini emsebenzini kanye noHezekeli, ukuba nesikhathi esithile sokuphola phakathi ebalulekile. Ukuba ithuba lokuphumula esitimeleni njengoba esishintsha nakanjani omunye izizathu eziningi zokuthi kungani abantu bakhethe izitimela.
Ekhuluma izitimela elide, kunjalo kukho kumnandi ukuhamba njengoba ukuvumela isikhathi sokuphumula. Ukuthola ukusuka endaweni A kuya endaweni B e 2 amahora ngendiza ayasebenza, kodwa ingabe iphephile impilo yakho? Ingabe inselelo kokuthunyelwe kwebhulogi “Izincwajana zemininingwane Lowo ephephile zezokuthutha”? can yakho umzimba nengqondo ukucubungula kube noshintsho olusheshayo sezulu, ingcindezi yasemkhathini, nakho konke okunye phakathi? Lutho neze. Lena kungani ehamba ukuqeqesha emhlabeni Europe ivumela umzimba wakho ukuthi ujwayele izinguquko futhi uzicubungule ku-a ngendlela enempilo.
Hhayi ngokunembile impilo noma ukuphepha inzuzo, kodwa umthwalo ukuphepha kudlala indima kuhle abalulekile kwabanye abagibeli. Kungakhathaliseki uma iphakethe ukukhanya ukuhamba noma cha, ofuna imithwalo yakho yinye. abahambi Iningi kukhona abaqoqi zobuciko eziyigugu, imifanekiso, amadokhumenti, njll. futhi bona bafuna izinkumbulo zabo nabo. Ngeshwa, ukuhamba ngendiza waziwa ngemithwalo elahlekile neyonakele okuyinto engavamile ukwenzeka lapho uhamba ngesitimela. plus, imithwalo yakho uhlale nawe, ngakho akekho ongazihlwitha nganoma isimangalo somthwalo. Ingabe lo isizathu ukuthi isitimela ingenye izindlela nephephile yokuhamba? Sicabanga kanjalo.
#Fashion ravel ezithambile	#ephephile	#ukuhamba okuphephile	#zokuthutha